Umthandazo kuSanta uMikayeli weengelosi ezinkulu zothando.? Iintshaba kunye noKhuselo.
Umthandazo kwiNgcwele uMikayeli weengelosi kukungena el mundo egcwele imfazwe yokomoya ukusukela le ngelosi inkulu, ebonakala kumabali ebhayibhile, imelwe njengegorha elivela ezulwini elithunyelwe emhlabeni ukuba lilwe amadabi ethu okomoya.
Singalucela uncedo lwakho nangaliphi na ixesha silufuna, uhlala ezimisele ukusinceda ukuba silwe ngokomoya amadabi angenakulwa ngokwasemzimbeni.
1 Umthandazo kwiNgcwele kaMikayeli iNgilosi enkulu Ngubani iNgcwele uMikayeli ingelosi enkulu?
1.1 Umthandazo kwi-Angelo Engcwele yingelosi enkulu yothando
1.2 Umthandazo weSanta uMikayeli weengelosi ngokuchasene neentshaba
1.3 Umthandazo wokukhuselwa
1.4 Umthandazo wokufumana umsebenzi
Umthandazo kwiNgcwele kaMikayeli iNgilosi enkulu Ngubani iNgcwele uMikayeli ingelosi enkulu?
Ukucacisa ukuba ngubani uSan Miguel, sinokuqala ngokuthi igama lakhe linentsingiselo yoThixo njengoThixo.
Inye kweengelosi eziphambili ukusukela oko igama lakhe likhankanyiweyo kwi Izibhalo ezingcwele ngokulandelayo kwiAngel Rafael noGabriel. Ukapteni womkhosi wasemazulwini kunye nezinye iingelosi bathobela imiyalelo yakhe.
Ukususela ekuqaleni kokholo lobuKristu, uSt. Michael ubonwa njengegorha elalikwazi ukoyisa utshaba olubi uSathana nazo zonke iidemon zakhe ngekrele lomlilo elinamandla.
Ungumgcini kunye nomkhuseli othembekileyo oko kuyakugcina ubomi bethu, iintsapho kunye nepropathi yethu ngokufanelekileyo.
Umthandazo kwi-Angelo Engcwele yingelosi enkulu yothando
UThixo akusindise, ngelosi enkulu uSt. Michael unqobile, usikelelekile kwaye ingelosi ezukileyo kaThixo kwaye ubabalwe kakhulu nguYe, namhlanje kwintlungu yam ndiyakubongoza, ndikubiza ngokholo, kwaye ndicela uncedo lwakho kunye nenkuselo yakho;
Ndiyakucela ukuba uchithe onke amandla amabi anokuba achaphazela mna, undigubungele ngokukhanya kwakho nangamandla akho asebenzayo kwaye akhawulezayo ndithethele ukuze ndibone iminqweno yam izaliseka.
Ingelosi enkulu uMichael umlondolozi wamasango eZulu, ndikunika umbulelo wam ngokuthobeka ngenkonzo osoloko undinika yona nesizathu sokuba ndiyazi ukuba uza kundinceda kwiingxaki zam zothando:
(Thetha into ofuna ukuyiphumeza)
Owu, yingelosi enkulu uMikayeli, inkosana yasezulwini, ingelosi endigada ngayo! Ndikubuza ngokuthobekileyo ukuba umamele ilizwi lam kwaye ubeke entliziyweni yam uxolo olunqwenelekayo endilulangazelelayo.
Andinakukwazi ukuhlala ngoxolo kwaye umphefumlo wam uzele kukungaphumli.
Ndinokunyanga kuphela izifo zam kwaye ndinqande usizi lwam olunothando:
Owu yingelosi enkulu uMikayeli, inkosana yasezulwini, ingelosi yam endigcinayo, phulaphula izwi lam! Egameni loYise, egameni loNyana, naseGameni likaMoya oyiNgcwele.
I-Connoisseur Uthando oluthembekileyo kunye nothando olungagungqiyo, ezele luthando lobuThixo uBawo waseZulwini uqobo alugxothayo ngobukho bakhe.
Akukho mntu ulunge ngakumbi kunaye onokusinceda ngemicimbi yentliziyo ezisa iinkxalabo ezininzi ebomini bethu.
Nokuba ungafumana uthando, uqonde indlela, uphucule ubudlelwane okanye usikhokele xa sisenza izigqibo ezifanelekileyo.
Masicacise indlela eyiyo esifanele siyithathe kwaye isincede ngamaxesha onke.
Umthandazo weSanta uMikayeli weengelosi ngokuchasene neentshaba
Uzuko ISan Miguel ArcangelWena owalwa amadabi akrakra ngokuchasene nabathunywa bobubi nentiyo;
wena uphumelelayo ebubini bobutshaba nakububi;
wena uphumelele uloyiso kwimigibe emibi yenkosana yobumnyama, ukhusela lonke uluntu kwizikhonkwane zayo, ndiyakuncenga ukuba undinike ukhuseleko lwakho kubo bonke abanqwenela ububi kwaye uthintele izixhobo zedemon ukuba zingabanjiswa kum.
Zinyamekele iintshaba ezithe cwaka, zezobubi, kwaye undincede ndikwazi ukulunga ukuze, ngesimo sam sengqondo, kungabikho mntu ukhubekisayo okanye onembali, kwaye ngokuchasene noko, uhlala ngoxolo nabantu ukuba beze kuThixo ngesidima.
Ndinike uloyiso kuzo zonke iintshaba nasebubini.
Ibali lixela indlela avela ngayo boyise iintshaba de baphoswe ngaphandle kwezulu.
La IBhayibhile Umbonisa njengegorha elinamandla elinokuthenjwa lokusinceda ukuba silwe amadabi ethu okomoya nawokwenyama ngamaxesha onke.
Iintshaba zibangela inkxalabo kuba amaxesha amaninzi ukulwa okanye ukuphazamiseka kuyinto eqhelekileyo ebomini bethu.
Ukuba nomlingani ezulwini oza kubizo lwethu kubaluleke kakhulu kuba ukulwa ngokomoya kungcono kakhulu kunokuba ungene ematyaleni kunye nezo ntshaba zisicaphukisayo.
Owu Khanyayo omkhulu uMikayeli, Ingelosi kunye nenkokeli yemikhosi yasezulwini,
Ukhutholo kunye nomkhuseli wemiphefumlo, umgcini weCawa, ophumeleleyo, oyikisayo noloyiko loomoya abanemvukelo.
Siyacela, ngokuthobeka, sihlangule kubo bonke ububi esibuyela kubo ngokuzithemba;
ngamana ukulunga kwakho kungasikhusela, ngamandla akho angasikhusela, kwaye, ngokhuselo lwakho olungenakuthelekiswa nanto, sinokuqhubela phambili nangakumbi kwinkonzo yeNkosi;
Kwangathi isidima sakho singasizabalazela yonke imihla yobomi bethu, ngakumbi kwingqondo ukufa, ukuze, ukhuselwe ngamandla akho kwinamba engapheliyo kunye nayo yonke imigibe yayo, xa silishiya eli hlabathi siza kuziswa nguwe, ukhululekile kubo bonke ubutyala, phambi kobuKhulu obuNgcwele.
Ukuba ufuna ukukhuselwa, lo ngumthandazo oqinisekileyo weengelosi ezingcwele.
Isicaka esithembekileyo esinika ukhuseleko kunye nenkathalo yabantwana bakaThixo abalapha emhlabeni kwaye, njengoko wayethunywe ngaphambili ukunikezela ngononophelo ngexesha, uya kuphinda enze njalo nathi.
Unogada onamandla ogcina usapho lwethu kunye nezinto eziphathekayo zikhuselekile.
Phakamisa ngumthandazo Imihla ngemihla isigcina sinokholo lokuba umntu othile usikhathalela kubo bonke ububi kunye nengozi ehlala ihlala ilungile kubomi bethu bemihla ngemihla.
Ingelosi enkulu yeSan Miguel, ukuba uhleli ecaleni koPhezulu.
Ngale mini ndiza kuqubuda kuwe ndicela ukuba ungaphoswa ngumsebenzi.
Abantu abaninzi ngaphandle kwam baxhomekeke kuyo. Ndiyathemba ukuba ndithembele kwintsikelelo yakho yanamhlanje, ngomso kwaye ndihlale ndifumana umsebenzi wam ukuba uphumelele kwaye uneziphumo ezilungileyo. Ndiyazi kakuhle ukuba ukhulule imiphefumlo elahlekileyo kwipurigatori.
Ndicela ukuba wenze umsebenzi wam ube neziqhamo yonke imihla njengoko unangoku.
Ndifuna ukunceda kwimithombo yengqesho, kuba ngaloo nto ndiya kuziva ndonelisekile xa ndibona ukuba abasebenzi bam bayawonwabela umsebenzi kunye nam.
Ingcwele kaMikayeli, ingelosi enkulu, asithandazele kwaye simamele la mazwi.
Thandaza ku Umthandazo weSanta Michael eNkulu ukufumana umsebenzi ngokholo oluninzi.
Inkonzo yakhe yeengelosi ikwagxininisa kuncedo lwabo bangathathi ntweni, yiyo loo nto umthandazo kuSt. Michael ukufumana umsebenzi Iba sisixhobo esinamandla esinokusisebenzisa ngaphambi kokwenza udliwanondlebe lomsebenzi ukusinceda nokusinika ubabalo phambi kwabanye.
Icawe yama Katolika ehlabathi jikelele isimema ukuba sizinikele kule ngelosi inkulu inokholo, sikholwa ukuba angasinceda ukuba sifumane umsebenzi osifaneleyo, sizikhusele kuyo nayiphi na ingozi, asikhusele kubo bonke ububi asibukele.
Asinakuphakamisa umthandazo ngenxa yaso nasiphi na isizathu ukuba asikwenzi oko sikholelwa ngentliziyo ukuba ummangaliso esiwudingayo uya kusinikwa uvela ezulwini.
Ewe, akukho mpendulo icacile kwaye iya ngqo kunoko.
Sikholelwa ngokuthembekileyo into ekuxelela yona kwilizwi likaThixo malunga nemithandazo kwaye yiyo loo nto sikholelwa ukuba ukuba siphakamisa umthandazo kuSt.
Kufuneka nje sibe nokholo xa sithandaza Umthandazo onamandla kuMoya oyiNgilosi omkhulu.
UMarko oNgcwele, umthandazo onamandla
Umthandazo onamandla weSanta Charbel